Mifohaza maraim-be fa hahazo tombony be ianao - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mitsinjara ho telovolana telo ny taom-pianarana 2013-2014. Tsiahivina fa efa nisy ny fotoana natao isan-droa volana ny fitsinjarana ny fotoam-pianarana tao anatin’ny taom-pianarana iray. Izao izy naverina ho isan-telovolana izao indray.
“Ho anay dia eto amin’ity telovolana faharoa ity no herin’ny taom-pianarana iray. Eto dia efa tazana ny ankizy hahomby sy ireo mila tosika manokana” hoy Doudou Ratoejanahary, tale jeneralin’ny Vondrona Arcade.Nambarany fa ho an’ny Vondrona tantaniny dia faranana ao anatin’ity telovolana faharoa ity ny fandaharam-pianarana manontolo indrindra ho an’ireo kilasy manala fanadinana ara-panjakana (CEPE, BEPC, Bakalorea). “Natao izany ezaka izany satria arakaraka ny fahavitan’ny praograma alohaloha no hahafahana manao famerenana na révision lalindalina sy fanazarana lavalava sy maro karazana” hoy ity tale ity.
Izay no anjaran’ny sekoly. Manana ny anjara koa ny mpianatra. Tsy mpanjifa ny mpianatra ka tonga dia mibata mody izay omena azy satria nandoa ekolazy. “Manana andraikitra lehibe ny mpianatra” hoy ity mpampianatra iray. Anjarany ny manatona ny mpampianatra raha misy ny manahirana na mampisalasala azy. “Aoka tsy ahatoky tena ny mpianatra fa aleo manadihady tsara” hoy izy nanohy. “Ny mpampianatra ato aminay dia efa nomena toromarika handray ny mpianatra mila fanampim-panazavana” hoy ity talen-tsekoly iray. Tsapa fa misy tokoa ireo mpampianatra manatsahatra ny fampianarany 10 minitra alohan’ny hiravan’ny fotoana natokana hampianarany. Natokan’ireny mpampianatra ireny io 10 minitra io mba hahafahan’ny mpianatra mangata-panazavana na mitondra laza adina vaovao. Tsikaritra ko amaro ankehitriny ireo sekoly no manao ny antsoina hoe “portes ouvertes” eo amin’ny fiandohan’ny telovolana faharoa izao. “Tsy natao hisarihana mpianatra vaovao velively io fotoana io araka ny fiheveran’ny ray aman-dreny sasany” hoy Ramanantsahala, talen-tsekoly iray. “Natao izao hifampitafan’ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra mba hahafahana manitsy haingana ny dian’ny zaza iray
” hoy izy. Voalaza fa efa roa taona no nanaovan’ity sekoly an’izao portes ouvertes izao. Novana mihitsy ny fanomezana ny bulletin scolaire. Tsy nomena amin’ny faran’ny telovolana voalohany fa amin’izao portes ouvertes izao izay tontosaina amin’ny fiandohan’ny taona vaovao. Mandritra izany fotoana izany ny ray aman-dreny dia mahazo fanazavana manokana avy amin’ireo mpampianatra momba ny zanany. “Misy ny ray aman-dreny eo vao gaga raha hilazana fa mitabataba ny zanany any an-tsekoly fa tsy ilay noheverina fa anjely na zaza bonaika” hoy ity tale.
Ny fiezahan’ny mpianatra no hahazoany vokatra tsara. Manomboka amin’izao telovolana faharoa izao no tena mila milofo ny mpianatra. “Mifoha maraim-be no tsara. Manomboka any amin’ny efatra ora na efatra ora sy sasany any. Mbola mangina ny tontolo amin’izany ary afa-bizana ny vatana sy ny saina” hoy Ratoejanahary. Ho azy dia tsy azo ampiarahana ny taranja mavesatra toy ny matematika sy fizika fa mandrera-tsaina ny fanaovana an’izany. Mila mahay mampiasa fiche ny mpianatra rehefa amin’ny kilasy ambonimbony. Tsy tsianjery intsony no hatao fa ventin-kevitra no raisina ary mila mahafehy ny fanitaran-kevitra.
Aza resin'ny rendradrendra
Be ny rendrarendra misarika ny tanora ankehitriny mila mahafehy tena izany ny mpianatra hanala fanadinana. Misy ezaka takiana amin’ny ray aman-dreny amin’izay fotoana izay. Anjaran’ireo ray aman-dreny ny mijery ny ezaka ataon’ny zanany. Tsy voatery hahay matematika ny ray aman-dreny fa ny fanaraha-maso ny zanany no tena zava-dehibe. Ohatra tsy tsara ny mpianatra raha miondana finday. Mazava loatra fa tsy fianarana no hita ao anaty finday fa matetika sms na soratra maro sosona. Lavitry ny fianarana izay soratra maro sosona izany. Misy dia misy tokoa ireo tanora no mampiasa ny fitaovana maoderina hanampy azy amin’ny fianarana. Ao ireo mampiasa ny tablette ireny. Maro ireo rohy hita ao tahakaity iray ity http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/planning-de-revision-du-bac-comment-reviser-le-bac.html. Tsara izany saingy mila mahafehy tena ary tsapa fa mbola vitsy ny tena sahaza ho an’ny mpianatra amin’ny kilasy Terminale mainka moa fa kilasy hanala BEPC. Rendrarendra izany no etaka. Rariny ny an’ny ray aman-dreny izay maka ny findain’ny zanany mba hifantohany amin’ny fianarana. Mila mitandrina tsara koa anefa raha manao izany fa mety hiteraka “frustration” ny fanaovana izany ka mifanipaka amin’ny tanjona nokendrena ny vokatra azo.
Ny mpianatra no hiatrika fanadinana fa tsy afa-misaraka ny fiarahana miezaka avy amin’ny sekoly (mpampianatra sy mpanabe) ary ny ray aman-dreny (mpitaiza). Mahombiaza ary.